पोखरामा एमाले र पूर्वएमाले नेताबीचको रोचक टक्कर :: मनोज सत्याल :: Setopati
पोखरामा एमाले र पूर्वएमाले नेताबीचको रोचक टक्कर
पोखरा महानगरको २५ वडाका १५० मतदातासँगको कुराकानीमा आधारित विश्लेषण
पोखरा, वैशाख २६
युवराज श्रेष्ठ पोखरा, वैशाख २६
पोखरा महानगरमा मेयर पदका उम्मेदवार कृष्ण थापा र धनराज आचार्य
हरेक साँझ पोखराको लेकसाइड क्षेत्र गुलजार हुन्छ। झिलिमिली बत्ती र रेष्टुरेन्ट तथा बारहरूमा बज्ने संगीतले पोखराको माहोल रंगीन बन्छ।
अहिले पर्यटकीय सहर पोखरामा दिउँसै गुलजार छ। चुनाव प्रचारको गीत घन्काउँदै राजनीतिक दलले मिनेट-मिनेटमा गाडी दौडाइरहेका छन्। प्रत्येक टोलमा पार्टीका झन्डा सडकका वारपार टाँगिएका छन्। जसले रातमा मात्र हैन दिउँसै पोखरालाई झिलिमिली बनाएको छ।
यो राजनीतिक झिलिमिली रोचक हुनुको अर्को कारण पनि छ। यसपालि पोखरा महानगरको मेयरमा मुख्य टक्कर एमाले र पूर्वएमाले नेताबीच छ। अर्थात् कृष्ण थापा र धनराज आचार्यबीच। थापा एमालेका तर्फबाट मेयरका उम्मेदवार हुन् भने एमाले फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादीका नेता आचार्य पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनका।
पोखरा महानगर एमालेको गढ मानिन्छ। हरेक चुनावमा यहाँका मतदाताले एमालेका उम्मेदवारलाई विजयी बनाएर शासन र प्रशासन चलाउने अधिकार सुम्पिएका छन्। २०७४ को निर्वाचनमा एमालेका मानबहादुर जिसीले मेयरमा ६० हजार १ सय १८ मत ल्याएका थिए। त्यतिबेला नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गरेका थिए। गठबन्धनका उम्मेदवार रामजी कुँवरले ४६ हजार ४ सय १६ मत मात्र प्राप्त गरेका थिए।
चुनाव प्रचार गर्दै दलहरु । तस्बिर: मनोज सत्याल/सेतोपाटी
एमाले फुटेर सोही पार्टीमा लामो समय काम गरेका दुई नेता मेयरमा उठेपछि पोखरामा एमालेले आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने चासो छ।
क्षेत्रफलका हिसाबले पोखरा नेपालको सबैभन्दा ठूलो महानगरपालिका हो। पछिल्लो तीन दिनमा हामी मतदाता भेट्दै पोखराका लेकसाइड, बाटुलेचौर, न्युरोड, नदीपुर, बगर, महेन्द्र गुफा, रामबजार, बेगनास, लेखनाथ, तालचोक, सुन्दरी डाँडा, पानी ट्याङ्की, दोबिल्ला, भरतपोखरी, निर्मलपोखरी, छोरेपाटन, सराङकोट, बिरौटा र कास्कीकोटलगायत ठाउँमा पुग्यौं। पोखरा महानगरपालिकाका ३३ मध्ये २५ वटा वडामा पुगेर १ सय ५० मतदातासँग कुराकानी गर्‍यौं। मतदातासँग हामीले उनीहरूका मुख्य चासो के हुन्, स्थानीय विकासका एजेन्डा के हुन्, कुन उम्मेदवारलाई किन मत दिनु हुन्छ भनेर सोध्यौं।
हामीले कुराकानी गरेका १ सय ५० मतदातामध्ये ५६ मतदाताले यसपटक एकीकृत समाजवादीको कलम चिन्हमा धनराज आचार्यलाई मत दिने बताए। जसमध्ये ३१ मतदाताले अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई मत दिएका थिए। त्यस्तै अघिल्लो पटक मेयरमा नेकपा एमालेलाई मतदान गरेका २१ मतदाताले पनि धनराजलाई मत दिने बताए। ती २१ मतदातामध्ये २ जनाले मात्र एकीकृत समाजवादी पार्टी रोजेको बताए। बाँकी १९ जनाले अहिले पनि वडामा एमालेलाई मत दिने तर मेयरमा धनराज आचार्यलाई कलममा मत दिने जनाए। त्यस्तै माओवादी केन्द्रलाई मतदान गर्ने दुई र जनमोर्चालाई मतदान गरेका दुईले पनि कलममा मत दिने बताए।
साराङकोटबाट देखिएको पोखराको दृश्य। तस्बिर : मनोज सत्याल/सेतोपाटी
पोखराका मतदातामा धनराज आचार्यको पक्षमा राम्रो प्रभाव देखिनुका केही कारण छन्।
पहिलो, विगतमा एमालेको राजनीति गरेका कारण र तुलनात्मक रूपमा उनको मिजासिलो व्यक्तित्वका कारण एमाले मतदाता उनीसँग सकरात्मक देखिन्छन्।
'धनराजलाई योग्य मान्छे पनि छन्। उनले विगतमा मौका पाएनन्', पोखरा लेकसाइडमा भेटिएका ३१ वर्षीय ज्ञानेन्द्र नेपालीले भने, 'हामीले पहिला एमालेमै मत दिएका हौं। युवा संघ र युथ फोर्सको राजनीति गरेर निक्कै ढुङ्गा पनि हानियो। तर यसपटक धनराजलाई मत दिने हो।'
अर्कोतर्फ एमाले उम्मेदवार कृष्ण थापा मेयर उम्मेदवार बन्नु अघिसम्म प्रदेश सभा सांसद थिए। उनी २०५४मै मेयर भइसकेका व्यक्ति हुन्।
'कृष्ण थापा नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सी हुन्', वडा नम्बर १५ मा भेटिएका रमेश पाण्डेले सेतोपाटीसँग भने, 'उनी आशा गर्न सकिने मान्छे छैनन्। मैले अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा एमालेलाई मत दिएको हो। तर अहिले निर्णय गरिसकेको छैन।'
वडा तहमा अझै पनि एमालेमै मतदान गर्ने कतिपय मतदाताले पनि धनराजलाई मत दिने बताएका छन्। पोखरा उपत्यका वरपरका डाँडामा एमालेको राम्रो पकड छ। एमालेका स्वर्गीय नेता रवीन्द्र अधिकारी र धनराज आचार्यको गाउँ एउटै भएकाले त्यस्ता ठाउँबाट पनि उनलाई मत आउने देखिन्छ।
पोखरा महानगरको वडा नं १६ का मतदाता। तस्बिर: मनोज सत्याल/सेतोपाटी
'वडाकै मान्छे भएकाले मेयरमा धनराजलाई दिनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ', पोखरा- ३३ मा पसल सञ्चालन गर्ने २८ वर्षीय युवाले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, 'धनराज आचार्यले गाउँको भेला गरेर मेयरमा मात्र भए पनि मत दिन भन्नुभएको छ।'
दोस्रो, गठबन्धनको लाभ धनराजलाई मिल्ने देखिन्छ। सधैँ एमालेसँग पौंठेजोरी खेलेका कांग्रेस कार्यकर्ताले पोखरामा एमालेलाई हराउने मौकाका रूपमा यसलाई लिएका छन्। अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा ११ वटा वडा जितेको कांग्रेस यसपटक त्यसको दोब्बर संख्यामा जीत हात पार्ने दाउमा छ। त्यसैले कांग्रेस कार्यकर्ता एमाले हराउनकै लागि कलममा मतदान गर्न तयार छन्।
'मेयरमा कलमलाई मत दिन्छौं। एमालेको कार्यकालमा हाम्रो असन्तुष्टि छ', पोखरा- ३१ का वीरबहादुर तामाङले भने, 'अब हामी महानगरको कामका लागि सबैलाई समेटेर लैजान्छौं।'
कांग्रेसका अधिकांश मतदाता धनराज आचार्यको पक्षमा खुलेका छन्। माओवादीका मतदाता पोखरामा महानगरको बजार क्षेत्रमा नभेटिए पनि लेखनाथमा भेटिएका केही मतदाताले गठबन्धनकै उम्मेदवारलाई मत दिने बताए।
कांग्रेसका केही मतदाता गठबन्धनको निर्णयसँग असन्तुष्ट पनि छन्। पोखरा-१० मा चामलको गोदाम सञ्चालन गर्ने कुलराज पौडेलले मेयर पदका लागि आफूले मतदान नै नगर्ने बताए।
'मैले मतपत्रमा मेयर पदको ठाउँ खाली राखिदिएँ भने मात्र नेताहरूले जनताले गठबन्धन ठीक मानेनछन् भन्ने थाहा पाउँछन्', कुलराजले भने, 'गठबन्धन भनेर बाँडेर खाने भए एमालेलाई पनि ल्याए भयो त। चुनाव गर्ने पैसा खेर जाँदैन। यदि कांग्रेस राम्रो भन्ने हो भने जनताले मत दिन्छन् भन्ने विश्वास गर्नुपर्छ। राम्रो काम गर्ने विश्वास नभए पदमा किन बस्नैपर्ने?'
हामीले कुरा गरेकामध्ये पोखरा महानगरमा अघिल्लो पटक कांग्रेसमा मतदान गरेका ४ मतदाताले यसपटक मेयरमा मत नदिने बताए।
पोखराको बेगनास ताल नजिक वडा नं ३१ का मतदाता अजित मगर। तस्बिर : मनोज सत्याल/सेतोपाटी
तेस्रो, पोखराको मुख्य बजार क्षेत्र र लेखनाथ क्षेत्रबीच क्षेत्रगत हिसाबले मतभेद र तानातान हुनेगर्छ। पोखरा उपमहानगरपालिका र लेखनाथ नगरपालिका मिसाएर महानगर बनेको हो। विशेषगरी लेखनाथ क्षेत्रमा आफ्नै भेगका उम्मेदवारलाई मत दिने बढी सम्भावना हुन्छ। धनराज आचार्य लेखनाथकै भएकाले उनलाई त्यसको लाभ थोर-बहुत मिल्ने अवस्था छ।
'लेखनाथमा एमालेले राम्रो काम गरेन। हामीलाई काम गर्ने मान्छे चाहियो। अघिल्लो पटक पिटाई खाएर मानबहादुर जिसीलाई भोट दिइयो। अहिले बेगनास ताल आउने बाटो खत्तम छ', बेगनासमा डुंगा चलाउने मेघनाथ तिवारीले भने, 'छिमेकी रूपा गाउँपालिकामा एमालेले राम्रो काम गरेको छ। तर यहाँ राम्रो काम गरेन।'
अब कुरा गरौं एमालेबारे।
हामीले कुराकानी गरेका १ सय ५० मतदातामध्ये ३८ ले यसपटक एमालेका कृष्ण थापालाई सूर्य चिन्हमा मतदान गर्ने बताए। त्यसमध्ये ३६ मतदाताले अघिल्लो पटक पनि सूर्यमा मतदान गरेका थिए। बाँकी २ जनाले अघिल्लो पटक कांग्रेसलाई मतदान गरेका थिए। यसपटक उनीहरूले सूर्यमा मत दिने जनाए।
हामीले भेटेकामध्ये केही मतदाता अझै अनिर्णित अवस्थामा थिए। अनिर्णित भेटिएका ४३ मध्ये १५ मतदाताले अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेका उम्मेदवारलाई मत दिएको बताए। त्यस्तै सात मतदाताले कांग्रेसलाई मत दिएका थिए। अहिले अनिर्णित मतदाताले सूर्यमा मतदान गर्ने हो भने पोखरामा यसपटक एमालेको गढ जोगिन सक्छ। तर यो समूहको आधाले मात्र पनि कलममा मतदान गरेको अवस्थामा पोखरा महानगरमा एमालेको गढ भत्कने देखिन्छ। अहिलेसम्म अनिर्णित मतदातामध्ये आधाभन्दा धेरैलाई अब आफ्नो पक्षमा तान्न एमालेलाई धेरै कठिन छ।
पोखरामा एमालेको आफ्नो परम्परागत तागत भने अहिले पनि बरकरार छ। उसलाई सबैभन्दा ठूलो संगठनको लाभ छ। एमालेले पोखरामा वडा तहमा मात्र होइन टोल-टोलमा संगठन बनाएको छ। पार्टीलाई लेभी तिर्ने कार्यकर्ताको ठूलो पंक्ति छ। त्यसले गर्दा एमालेलाई लाभ मिल्ने देखिन्छ।
'हाम्रो घरमा पार्टीलाई पैसा बुझाउने मान्छे छन्। मुख लुकाएर यसमा उसमा भन्ने छैन। एमालेमा मत दिने हो', ६६ वर्षीया एक मतदाताले भनिन्, 'अब त वृद्धभत्ता आउने बेला पनि भयो। गठबन्धनले देशको अवस्था श्रीलंका बनाउने भयो।'
एमालेका समर्थकले अहिले पनि वृद्धभत्ता लगायतको प्रचार गर्ने गरेका छन्। जसको लाभ एमालेलाई छ। कतिपय वृद्ध मतदाता नयाँ ठाउँमा मत दिन तयार छैनन्।
पोखरा महानगर वडा नं ६ लेकसाइडका मतदाताहरु। तस्बिर : मनोज सत्याल/सेतोपाटी
'पहिलेदेखि सूर्यमा मत दिएको हो, धर्म छाड्नुहुन्न', पोखरा-१७ दोबिल्लामा भेटिएकी एक महिलाले भनिन्, 'सूर्यमै मत दिने हो।'
एमालेलाई अर्को फाइदा भने जातीय फ्याक्टरको छ। एमालेका मेयर उम्मेदवार क्षेत्री समुदायका छन्। उपमेयर गुरूङ समुदायकी छिन्। जबकी सत्ता गठबन्धनका दुबै उम्मेदवार बाहुन-क्षेत्री समुदायका छन्। पोखरामा क्षेत्री समुदाय र गुरूङ समुदायको मत सामूहिक ढंगले प्रकट हुने गरेको स्थानीयहरू बताउँछन्। विगतमा क्षेत्रीय समूह नै खडा गरेर प्रदर्शन भएकाले पनि क्षेत्रीहरूको मत कृष्ण थापाले पाउन सक्ने अवस्था छ। अर्कोतर्फ मञ्जु गुरूङ उपमेयर भएकाले त्यो मतमा पनि एमालेले लाभ छ।
'विगतमा कुमार खड्काले अखण्ड नेपाल पार्टी बनाएर क्षेत्रीहरूको मत बटुलेको ठाउँ कृष्ण थापाको क्षेत्र हो', पोखरा- १६ का २८ वर्षीय युवा मतदाताले भने, 'जुन पार्टीको भए पनि क्षेत्री जिताउनु पर्छ भन्ने मत भएकाले त्यसको फाइदा कृष्ण थापालाई छ।'
हामीले राप्रपालाई मत दिन्छु भन्ने मतदाता पनि भेटायौं। अघिल्लो पटक एमाले र कांग्रेसमा मत दिएका ९ मतदाताले पनि हलोमा मतदान गर्ने उल्लेख गरे।
'म मेयरको भोट राजेन्द्र लिङ्देनको पार्टीलाई दिन्छु। उसको पार्टीको धर्मनिरपेक्षता हटाउने, संघीयता खारेज गर्नेलगायत एजेन्डा राम्रो छ', पोखरा-१२ का मतदाता नरेशबहादुर कार्कीले भने, 'मेयर पदको गरिमा दलले बुझेनन्। यो अरूलाई काम लगाएर त्यसको सुपरीवेक्षण गर्ने पद हो। इन्जिनियरले कस्तो काम गर्‍यो भन्ने बुझ्न सक्ने पढेलेखेका मान्छे त चाहियो नि। उल्टो कर्मचारी आएर उनीहरूलाई सिकाइराखेका छन्।'
हामीले कुराकानी गरेका मतदातामध्ये स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका गणेश पौडेललाई मत दिने २ जना भेटिए।
बेगनास तालका डुङ्गा चालकहरु। तस्बिर: मनोज सत्याल/सेतोपाटी
पोखरामा सबैभन्दा उत्साही भने कांग्रेस देखिएको छ। अघिल्लो पटक ११ वटा वडा जितेको कांग्रेस यसपटक दोब्बर जित्ने दाउमा छ। कांग्रेसका नेता/कार्यकर्ता अघिल्लो पटक थोरै अन्तरले विभिन्न वडा गुमाएकाले यसपटक आफूहरूले जित्ने हिसाब गरिरहेका छन्।
'हाम्रो वडामा पहिला ७० भोटले कांग्रेसले हारेको हो', पोखरा-२३ अनिल अधिकारीले भने, 'यसपालि गठबन्धन छ। धेरै मान्छे एमाले फुटेर गठबन्धनमा गएका छन्। बरू भोट बदर होला कि भन्ने चिन्ता छ।'
गठबन्धनकालाई यसपालि मत बदर हुने चिन्ता भने छ। एकीकृत समाजवादीमा जिल्ला सदस्यसमेत रहेका पोखरा-२४ का मतदाता नरबहादुर सुनारले बदरको सम्भावना आफूहरूले देखेको बताए।
'भोट बदरको सम्भावना मैले पनि देखेको छु', सुनारले भने, 'घर-घरमा गएर बुझाउने योजना बनाएका छौं।'
पोखरा-१८ सराङकोटका प्रेमप्रसाद तिमिल्सिनाले गठबन्धनका मतदाता अलमलिने भएकाले मत बदर हुने र त्यसको फाइदा एमालेलाई पुग्ने बताए।
'एमालेमा प्यानल भोट आउँछ। तर गठबन्धनमा अलमलिने सम्भावना छ', तिमिल्सिनाले भने, 'उनीहरूको भोट बदर हुने सम्भावना छ।'
नेकपा एमालेको पोखरा महानगर कमिटी अध्यक्ष दीलिप न्यौपाने पोखरा महानगरको चुनावमा तीन वटा फ्याक्टर महत्वपूर्ण रहेको बताउँछन्।
'जनजाति मतदाता, पहाडी क्षेत्रका मतदाता र लेखनाथ फ्याक्टर छन्', न्यौपानेले भने, 'पोखराको पहाडी क्षेत्रमा हाम्रो आधार इलाका हो। त्यो हामीलाई फाइदाजनक छ। हामीले उम्मेदवारीमा जनजाति फ्याक्टरमा सन्तुलन कायम गरेका छौं। लेखनाथ क्षेत्रबाट हाम्रो उम्मेदवार नभए पनि हामीले संगठनको बलमा मिलाउँछौं।'
न्यौपानेले आफ्नो पार्टीलाई गठबन्धनको मत बदर हुँदा थोरै लाभ मिल्ने स्वीकार गरे।
'गएको संसदीय चुनावमा एमाले र माओवादी गठबन्धन गरे पनि फरक-फरक चुनाव चिन्हमा निर्वाचन लड्दा हाम्रो मत क्षति भयो', न्यौपानेले भने, 'अहिले पनि धेर-थोर बदर मतको लाभ एमालेलाई होला।'
उनले पार्टी विभाजनको असर भने नकारे।
पोखरा महानगरको भरतपोखरीबाट देखिएको बेगनास ताल र वरपरको दृश्य। तस्बिर : मनोज सत्याल/सेतोपाटी
'विभाजनको असर ठूलो छैन। एकीकृत समाजवादीसँग वडा तहमा उम्मेदवार पनि छैन', न्यौपानेले भने।
उनले विगतमा कांग्रेसले वडाहरूमा झिनो अन्तरले हारेकाले अहिले जित्ने आकलनलाई समेत अस्वीकार गरे।
'नयाँ मतदाता थपिएका छन्। विवाहपछि थपिएका छोरी/बुहारी छन्', न्यौपानेले भने, 'पुरानो तथ्यांकको हिसाब स्थानीय तहमा मिल्दैन।'
नेपाली कांग्रेसका कास्की जिल्ला सभापति किशोरदत्त बराल चेतनास्तर बढेकाले मतदान सामुदायिक रूपमा हुने विषयलाई नकार्छन्।
'सामुदायिक मत जान्छन् भन्ने चर्चा हिजोदेखिकै हो। अब अहिले मान्छेको चेतनास्तर बढेको छ', बरालले भने, 'सबै मत त्यसरी नजाला भन्ने बुझ्छु।'
पोखराको सुन्दरी डाँडाबाट देखिएको रुपा ताल (बायाँ) र बेगनास ताल (दायाँ) को दृश्य। तस्बिर : मनोज सत्याल/सेतोपाटी
उनले भेगीय हिसाबले भने लेखनाथको मत आफ्नो उम्मेदवारलाई आउने दाबी गरे। 'हामीलाई लेखनाथबाट सबैभन्दा ठूलो सपोर्ट हुन्छ', बरालले भने, 'मेयरका उम्मेदवार धनराजजीको घर साविक भरतपोखरी लेखनाथमा पर्छ। उपमेयर कोपिला रानाभाट पनि त्यताकै उम्मेदवार हो। त्यसले हामीलाई सजिलो हुन्छ।'
बरालले मत बदर हुने सम्भावनाबारे आफूहरू सचेत रहेको बताए।
'चार वटा पार्टीसम्म गठबन्धन भएको ठाउँमा समस्यामा पर्न सक्ने देखेर वडास्तरमा साथीहरूलाई मतदाता शिक्षामा लाग्न भनेका छौं', बरालले भने, 'धेरै नै मत बदर होला भन्ने लाग्दैन। पक्कै पनि जटिलता छन्।'
सेतोपाटीको स्थलगत रिपोर्टिङले पोखराको निर्वाचनमा कृष्ण थापा र धनराज आर्चायबीच नै कडा प्रतिष्पर्धा हुने देखिन्छ। दुईबीचको मतान्तरसमेत निकै कम हुने देखिन्छ। सम्भवत: पोखरा महानगरको परिणाममा कति मत बदर हुन्छ भन्ने विषय निर्णायक बन्ने देखिन्छ।
यी पनि पढ्नुस्:
त्रिपक्षीय भिडन्त रहेको विराटनगरमा नागेश कोइरालाको पल्ला भारी
चुनाव नजिकिँदै जाँदा भरतपुरमा रेनु दाहाल बलियो कि विजय सुवेदी?
काठमाडौंको भित्री नेवार बस्तीमा केशव स्थापित, सिर्जना सिंह र बालेन शाहमध्ये को बलियो?
गठबन्धनको सहयोगमा इटहरीको लालकिल्ला पहिलोपटक तोड्ने आशमा कांग्रेस
वीरगन्जमा 'दबंग' नेता राजेशमानको सम्भावना धेरै, पछिपछि निवर्तमान मेयर सरावगी
प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख २६, २०७९, २३:१२:००
बैतडीको मेलौली नगरपालिकामा माओवादीका भीमबहादुर चन्द विजयी
३० वर्षदेखि अविच्छिन्न पालिका प्रमुख
माओवादीका रमेश थापाले फेरि जिते गोरखाको शहिद लखन गाउँपालिका अध्यक्ष
ललितपुरको कोन्ज्योसोममा सत्ता गठबन्धनलाई हराएर एमाले विजयी
प्रदेश १ को ३७ तहको नतिजा आउँदा कांग्रेसलाई उल्लेख्य सफलता